မြစ်ဆုံ: Nosebleed နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း
ကျနော်. ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖြစ်လေ. ဖြစ်ထ ရှိတဲ. ရောဂါပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ.ဘလော.
ထည်းမှာ ဆရာရဲ. အမေးအဖြေလေးကိုတွေ.တာနဲ. ကျနော်လည်းဖတ်ကျန်တဲ.လူတွေလည်းမျှဝေချင်တာနဲ. ကျနော်.ဘလော.လေးမှာ ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာ.ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါအကြောင်းကိုခုမှ ကောင်းကောင်းသိခွင်.ရခြင်းပါ။ကျနော်ကလည်းကျန်းမာရေးဗဟုသုတလိုက်စားတာနည်း
တာ ဖြစ်မယ်။စာတွေတော.ဖတ်တယ် နိုင်ငံတကာရေး၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အစုံ နည်းပညာ အကြောင်းပါမကျန် ဒါပေမယ်. ဆေးဆောင်းပါတွေ ဖတ်ဖို.ဆိုရင် တော်တော်လေးကို ပျင်းတာကကျနော်.ရဲ. အားနည်းချက်ပါ။ တစ်ကယ်ဆို ဒီဆေးဆောင်းပါးတွေက ပထမဦးစားပေး ဖတ်သင်.ပါတယ်။ ဘာလို.လည်း ဆိုတော. ဒါတွေ ဖတ်မှ ကျန်းမာရေး အသိရှိမှာလေ။ ဖြစ်မှ ဆိုရင် မလွယ်ဘူးပေါ.။ အလုပ်ပျက် အစားပျက် နဲ. အဆင်မပြေတာတွေကြုံလာရလိမ်.မယ်။ မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါဘဲ မဟုတ်လား။ ( မောင်မောင်)
aung: ဆရာခင်များ နာခေါင်းသွေးလျှံတာဘာကြောင့် ဖြစ်တာပါသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းပူတဲ့ UAE မှာ အလုပ် လုပ်နေရတာဆိုတော့ ဘယ်လို နေသင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါလားဆရာ။ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတယ်ဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
နာခေါင်းက သွေးယိုတာကို Epistaxis (Nosebleed) လို့ခေါ်တယ်။ Epistasis ဆိုတဲ့ မျိုးဗီဇရောဂါနဲ့ စာလုံးပေါင်း အတော် ဆင်တယ်။ နာခေါင်းက သွေးယိုတာက နှာခေါင်းရှေ့ယိုတာနဲ့၊ နောက်ကယိုတာ အမျိုးအစား ၂ ခုရှိတယ်။ ရှေ့ဖြစ်တာက အများဆုံးပါ။ နှာခေါင်း နောက်ကနေ ယိုတာက ကြာတတ်ပြီး ကုရခက်တယ်။ သိပ်ဆိုးရင် မျက်စိကနေယိုတာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ယိုတဲ့သွေးက အထဲဝင်သွားပြီး၊ အစာအိမ်ထဲရောက်၊ များရင် အန်ထွက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ အမေရိကားမှာ မှတ်တမ်းတခုအရ လူပေါင် ၂ သန်းခွဲဖြစ်တာမှာ ၄ ယောက်က သေဆုံးတဲ့အထိ ဆိုးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှေးခေတ် (ဟွန်) လူမျိုးတွေရဲ့ ဧကရာဇ် (အတီလာ) ဆိုသူဟာ မင်္ဂလာဦးညမှာ အရက်တွေ အလွန်အကြွံသောက်တော့၊ အိပ်ရာထဲ နှာခေါင်းသွေးတွေ ယိုရာကနေ၊ အသက်ရှူလမ်းပိတ်ပြီး၊ နတ်ရွာစံခဲ့ဘူးပါတယ်။
ယောက်ျားတွေက ပိုဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးရင် ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ နှာခေါင်းက သွေးယိုတာဟာ သွေးကြောမျှင်လေးတွေ ပေါက်လို့ပါ။ အကြောင်းရင်း နှစ်ရပ်ရှိတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကြောင့်နဲ့ နှာခေါင်းမှာ ပြဿနာ ရှိတာတို့ ဖြစ်တယ်။ တခါတလေလဲ ဘာ့လို့မှန်း မသိဘဲလည်း ယိုသေးတယ်။ Nasal packing နှာခါင်းကို ခဏခဏ ကိုင်တတ်သူများ အဖြစ် များတယ်။ နှာခေါင်းကို ထိခိုက်မိတာက အများဆုံးဖြစ်စေတယ်။ အသက်ရှူလမ်း ရောဂါပိုးဝင်ရာကနေလဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ ရှားရှားပါးပါး မွေးရာပါရောဂါတခုကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။ နှာခေါင်းထဲ တခုခုဝင်တာနဲ့ ရောဂါအကြိတ် တခုခု ဖြစ်တာတွေကလည်း အကြောင်းခံတွေ ဖြစ်တယ်။
ရှူရတဲ့လေဟာ ဆောင်းတွင်း ကာလတွေမှာလို Low relative humidity ရေငွေ့ဓါတ် နည်းလွန်းနေရင်လဲ၊ ယိုတတ်တယ်။ သိပ်အေးပြီး သိပ်ခြောက်သွေ့တဲ့အခါ အဖြစ်များတယ်။ နှာခါင်းကနေ ရှူရတဲ့ဆေးနဲ့ ဆေးသွင်း ပစ္စည်း ကရိယာတွေ ကြောင့်နဲ့ နှာခါင်းခွဲစိတ်တာလည်း ထည့်မပြောရင် ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ဘူး။
နှာခေါင်းကမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းခံတွေကတော့ (အလာဂျီ)၊ အအေးမိရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ တွယ်ဆက်-တစ်ရှူး ရောဂါ၊ Blood dyscrasias ခေါ် သွေးရောဂါ၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ရောဂါ၊ တိုက်ဖွိုက်၊ နူမိုးနီးယား၊ ငှက်ဖျား၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ၀က်သက်၊ နှာခေါင်း ဆုံဆို့နာ၊ အအေးမိရောဂါ၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ သွေးကင်ဆာ၊ ဗီတာမင် စီ နဲ့ ကေ နည်းရောဂါ၊ နောက်ပြီး Aspirin, Ibuprofen, Ginseng စတဲ့ဆေးတွေ၊ Anticoagulant သွေးမခဲဆေး၊ အရက်သောက်သုံးတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ သိပ်ပူတဲ့ အစား စားတာတွေ ပါဝင်တယ်။ (ကိုကိန်း) လို မူးယစ်ဆေးကြောင့်လဲ ယိုတတ်တယ်။
သွေးဆိုတာ သွေးကြောထဲက ထွက်ရရင် ခဲတတ်တဲ့ သဘော ရှိလို့ သူထွက်လာတဲ့ သွေးကြောမှာ အပိတ်လိုဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် သွေးထွက်မှာကို တားနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွေးခဲဘို့ အားပေးတဲ့အနေနဲ့ရော သွေးကြောကို ဖိအားနဲ့ ပိတ်တဲ့ သဘောလည်းဖြစ်အောင် သွေးထွက်တဲ့ နေရာကို ဖိနှိပ် ပေးထားတာက အကောင်းဆုံး ရှေးဦးသူနာပြုနည်းဖြစ်တယ်။ နှာခေါင်းဆိုရင်တော့ အပြော့ပိုင်းကို လက်မနဲ့ လက်ညှိုး သုံးဖိပေးရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရင် အကျိုးများစေလို့ နှာခေါင်းရဲ့ ရှေ့ပိုင်း တရိဂံပုံနေရာကို Kiesselbach's area, Little's area လို့ခေါ်တယ်။ ဖိတယ်ဆိုတာက တင်းတင်း ဖိရမှာ၊ ၅ မိနစ်လောက် ကြာသင့်တယ်။ ခေါင်းကို နဲနဲ ရှေ့ငုံ့ထားရင် အသက်ရှူလမ်းထဲ သွေး-သွေးခဲ မ၀င်အောင် ကာကွယ်ရာ ရောက်စေတယ်။ Trotter နည်းခေါ်တယ်။ ထိုင်နေစေပါ၊ ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှူစေပါ။ သွေးယိုတာ မြိုမချစေနဲ့။ နှာခေါင်းထဲက သွေးခဲကို အတင်းရှင်းထုတ်ဘို့ မကြိုးစားရ။
နှာခေါင်းနား၊ ဂုတ်ပိုး၊ နဖူးတ၀ှိုက်ကို ရေခဲ တင်ပေးတာ၊ ရေခဲကိုလဲ ပါးစပ်ထဲငုံတာမျိုး လူတွေ လုပ်နေကြဖြစ်ပေမဲ့ သုတေသန ကိန်းဂဏန်းနဲ့ ဘယ့်လောက် အကျိုးများတယ် ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်ဘူး။
သွေးကြောတွေကို ကြုံ့စေတဲ့ဆေး Oxymetazoline, Phenylephrine တွေကိုလည်းသုံး နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးမျိုးတွေက အအေးမိ နှာစေးအတွက်ပေးတဲ့ ရှူဆေးတွေထဲမှာ ပါတယ်။ သွေးခဲစေတဲ့ ဆေးတွေကတော့ Coalgan (France), Stop Hemo (Sweden, Italy, Switzerland) and NasalCEASE (US and Australia) တွေဖြစ်တယ်။ ဒီနည်းတွေနဲ့ မရရင် ဆရာဝန်ဆီ ရောက်ရတော့မယ်။
နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ဆရာဝန်ကနေ မီးရှို့ပြီး သွေးကြောပိတ်တာ လုပ်ချင်လုပ်မယ်။ နှာခေါင်းထဲ ပတ္တီးရှည် ထည့်ပေးချင် ပေးမယ်။ Gauze ပိတ်ကျဲစကို Vaseline or liquid paraffin ဆီတခုခုထဲစိမ်၊ Betadine Solution (10% povidone-iodine) ပိုးသန့်ဆေးရည် နည်းနည်းရောပြီး နှာခေါင်းထဲကို တင်းကြပ်နေအောင် ထိုးသွင်းထားရင် အတော် များများ ကောင်းသွားပါတယ်။ နှာခေါင်းရောဂါ ခွဲစိတ်ပြီးသူများကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ သွေးမထွက်အောင် လုပ်တယ်။ ၂၄ နာရီ နေရင် ပြန်ထုတ်ကြည့်၊ လိုအပ်ရင် တခါ ထပ်ထည့်တယ်။ Silver nitrate ဆေး ထည့်ပေးချင်ပေးမယ်။ နာမယ်ထင်ရင် ထုံဆေး သုံးပြီး လုပ်ပါတယ်။ ထုံဆေးထဲကို Injection Adrenaline ပါထည့်တယ်။ သိပ်ဆိုးရင် မေ့ဆေးနဲ့ ကရိယာထည့် စစ်ဆေးပြီး သွေးကြောကို ပိတ်ပေးတယ်။
နှာခေါင်းဖုံးအလွှာ Nasal mucosa ခြောက်နေလို့ ခဏခဏဖြစ်တတ်သူများ Saline spraying ဆားရည်ဖြန်းတာ တနေ့ ၃ ခါ လုပ်ရတယ်။ နှာခါင်းကိုလည်း Vaseline လိုမျိုးနဲ့ ချောမွေ့စေအာင် လုပ်ရတယ်။ အိမ်မှာလဲ ရေငွေ့ဓါတ်ပေးတဲ့ Humidifier တပ်ဆင်ထားရမယ်။ မကြာမကြာ ပြန်ဖြစ်သူများကို ပဋိဇီဝလိမ်းဆေး ပေးတာ အကျိုးရှိစေတာ တွေ့ရတယ်။ နှာခေါင်သွေးယိုတာ များသူ၊ ခဏခဏ ဖြစ်သူတွေမှာ သွေးအားနည်းရောဂါ ၀င်လာတတ်တယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ Juice of flower of pomegranate သလဲသီးပန်းကို အရည်လုပ်ပြီး၊ ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူစေတယ်။ Juice of fresh green grass မြက်ပင်သန့်သန့်ကို အရည်လုပ်ပြီး၊ နှာခါင်းတဖက်စီထဲကို ၅-၁၀ စက် ထည့်ခိုင်းတယ်။
မေးခွန်းမေးတဲ့သူအတွက် အဲလို တိုင်းပြည်ဒေသတွေမှာ နေရရင် ဆားရည်ကို နှာခေါင်းထဲ ဖြန်းဖြန်းပေးသင့်တယ်။ ကောင်းတာကတော့ Normal saline ခေါ်တဲ့ သွေးကြောထဲ သွင်းပေးရတဲ့ ပုလင်းထဲက ဆားရည်ဖြစ်တယ်။ ၀ယ်ရတာ ခက်ရင် ရေသန့်သန့်ထဲမှာ အိမ်သုံးဆား ၀့၉% ရအောင် ဖျော်ပြီး၊ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် စီ ဆေးရှာမရရင် သုံပရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ ဆီးဖြူသီး စားပါလေ။
Posted by မောင်မောင် at 15:21
မိမိချစ်သူ GSM ဖုန်းနံပါတ်သိရုံနဲ. သူဘာလုပ်နေကြောင်းဖော်ပြပေးတဲ. website
နည်းပညာ ခေတ်ကြီးကတော. လိုက်လို.ကိုမမှီနိုင်ဘူး။ ကဲ. အခုဖုန်းနံပါတ်လေး သိရုံနဲ. သူဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်သူနဲ. ရှိနေတယ်ဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူ သ...
(၂၄) ပစ္စည်း အနက် အဓိပ္ပါယ်အဖွင်.
ဖော်ပြပါ ဖွင်.ဆိုရှင်းလင်းချက်များကို ကျနော်.နယ်သား http://waiphyo-mogaung.blogspot.com/ မှ ပြန်လည် ကူးယူတင်ပြထား ...
စုံရိပ်မြိုင်ဆွယ်၊ ကန္တာလယ် အိုဘယ် ယောက်ျား ခရီသွား ဖော်လည်းမဆွယ်၊ တစ်ကိုယ်ငယ် အိုဘယ် လူသား၊ ကြောက်ဘူးလား...။ ဤသို့မေးသော် ...
ရှေးလူကြီးများထံမှ ဆိုမိန့်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစကားပုံများကို မှတ်သားသိရှိနိုင်ကြရန်အတွက်မျှဝေတင်လိုက်တာပါ သိမှတ်ထားကြတဲ့ မြန်မာစကားပုံများကိုမျ...